Mirabai: Bhakti စိန့်, ကျိန် ဆို. ပူဇော်ကဗျာဆရာ, ဘာသာရေး, Rani
ကျိန် ဆို. ပူဇော် Songs ရဲ့ Bhakti စိန့်, ကဗျာဆရာ, ဘာသာရေး, Rani, စာရေးဆရာ
Mirabai တစ်ဦး 16 ရာစုအိန္ဒိယတော်ဝင်, သက်သေသမိုင်းဝင်တကယ်တော့ထက်ဒဏ္ဍာရီမှတဆင့်ပိုပြီးလူသိများသည်။ အောက်ပါအတ္ထုပ္ပတ္တိလေ့လက်ခံခဲ့သည်ထားတဲ့ Mirabai ရဲ့ဘဝသူတို့အချက်အလက်များအစီရင်ခံရန်ကြိုးပမ်းမှုဖြစ်ပါသည်။
Mirabai Krishna ဟိန္ဒူဖို့ဆည်းကပ်၏သူမ၏သီချင်းများနှင့် Krishna ဟိန္ဒူ-ကိုးကွယ်ခြင်းအသက်တာကိုမြှုပ်နှံထားဖို့အစဉ်အလာအမြိုးသမီးမြားရဲ့အခန်းကဏ္ဍစွန်လူသိများခဲ့သည်။ သူမသည်တစ်ဦး Bhakti သူတော်စင်, ကဗျာဆရာနှင့်ဘာသာရေးဖြစ်ခဲ့သည်များနှင့်လည်း Rani သို့မဟုတ်မင်းသမီးလေး။
သူမသည်အကြောင်းကို 1498 ကနေအကြောင်းကို 1545. ဖို့နေထိုင်ခဲ့သူမ၏အမည်အားလည်း Mira Bai, Meerabai, Meera Bai, Meera, ဒါမှမဟုတ်Mīrābāīအဖြစ်ဘာသာပြန်ပြီးပါပြီ, သူတစ်ခါတစ်ရံ Mirabai ဒေဝီ၏ honorific ပေးထားသည်။
Mirabai ရဲ့ Rajputi အဘိုး, Rao က Dudaj, Mirabai ရဲ့အဖေ, Ratan Singh ကအုပ်ချုပ်ဘယ်မှာ Merta ၏ခံတပ်မြို့ဖန်တီးခဲ့သည်။ Mirabai အကြောင်းကို 1498. အဆိုပါမိသားစုကသူတို့မူလတန်းဘုရားအဖြစ်ဗိဿနိုးကိုးကွယ်လျက်, ပါဠိ, Rajasthan, အိန္ဒိယ၏ Kudki ခရိုင်အတွင်းရှိ Merta မွေးဖွားခဲ့သည်။
သူမ၏မိခင် Mirabai အကြောင်းကိုလေးခုအခါသေ Mirabai သူမ၏အဖိုးအဖွားများကကြီးပြင်းခြင်းနှင့်ပညာတတ်ခဲ့သည်။ Music ကိုသူမ၏ပညာရေးအတွက်အလေးပေးခဲ့ပါတယ်။
အစောပိုင်းနှစ်အရွယ်မှာ Mirabai ၏ရုပ်တုကိုတွဲခဲ့သည် Krishna ဟိန္ဒူ နယ်လှည့်သူတောင်းစားအားဖြင့် (ဒဏ္ဍာရီပြောပါတယ်) သူမ၏အားပေးပြီးမှ။
အသက်အရွယ် 13 သို့မဟုတ် 18 မှာ (သတင်းရင်းမြစ်ကွဲပြား), Mirabai Mewar တစ် Ranjputi မင်းသားလက်ထပ်ခဲ့သည်။ ယောက္ခမသူမ၏သစ်ကိုသူမက Krishna ဟိန္ဒူရဲ့ဗိမာနျမှာသုံးစွဲအချိန်ကိုအတူစိတ်ဆိုးခဲ့ကြသည်။ ကဗျာဆရာ Tulsidas ၏အက္ခရာအားဖြင့်အကြံပေးတွင်သူမ၏ခင်ပွန်းနှင့်သူ၏မိသားစုကထွက်လာခဲ့တယ်။
သူ၏မိသားစုတစ်ဦး Rajputi မင်းသမီးလေး (Rani) အတွက်သင့်လျော်ဟုယူဆခဲ့သည်အဖြစ်, သူမ၏ခင်ပွန်းရဲ့အသုဘ pyre အပေါ်အသက်ရှင်လျက်သူ့ကိုယ်သူမီးရှို့ Mirabai sati ကျူးလွန်မအလွန်အံ့အားသင့်ခဲ့ပါတယ်။ သူမတစ်ဦးမုဆိုးမအဖြစ် secluded နဲ့သူ့မိသားစုရဲ့ဘုရား, ထိုနတ်ဘုရားမကိုးကှယျမှဆက်လက်တည်ရှိရန်ငြင်းဆန်သည့်အခါထိုအခါသူတို့ကနောက်ထပ်အလွန်အံ့အားသင့်ခဲ့ကြ Durga သို့မဟုတ် Kali ။
အစားမုဆိုးမ Rajputi မင်းသမီးလေးအဘို့ဤအစဉ်အလာစံချိန်စံညွှန်းကိုအောက်ပါ၏, Mirabai အဆိုပါ Bhakti လှုပ်ရှားမှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် Krishna ဟိန္ဒူများ၏စိတ်အားထက်သန်ကိုးကှယျမှုဖွင့်ယူခဲ့ပါတယ်။ သူမသည် Krishna ဟိန္ဒူ၏အိမ်ထောင်ဖက်အဖြစ်သူ့ကိုယ်သူတွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ ထဲမှာအများအပြားကဲ့သို့ပင် Bhakti လှုပ်ရှားမှုသူမကကျား, မ, လူတန်းစား, လျစ်လျူရှု ဇာတ် နှင့်ဘာသာရေးနယ်နိမိတ်နှင့်ဆင်းရဲသောသူကိုစောင့်ရှောက်အချိန်နေခဲ့ရသည်။
Mirabai ရဲ့ဖခင်နှင့်ဖခင်-In-ဥပဒနှစ်ဦးစလုံးမူစလင်များကျူးကျော်လွှဲဖို့စစ်တိုက်၏ရလဒ်အဖြစ်ဦးသေဆုံးခဲ့သည်။ Bhakti ဝတ်ပြုရာသူမ၏အလေ့အကျင့် In-ဥပဒေများနှင့် Mewar ၏သစ်ကိုအုပ်စိုးသောမင်းကိုသူမ၏တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားခဲ့။ အဆိုပါဒဏ္ဍာရီ Mirabai ရဲ့နှောင်းပိုင်းတွင်ခင်ပွန်း၏မိသားစုအားဖြင့်သူမ၏ဘဝအပေါ်မျိုးစုံကြိုးစားမှု၏ပြောပြပါ။ ဤအကြိုးစားမှုအပေါငျးတို့သခုနှစ်တွင်သူမအံ့ဖှယျနညျးအသက်ရှင်ကျန်ရစ်: တစ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဆိပ်အပြင်းမြွေတစ်ဦးအဆိပ်သောက်နှင့်ရေနစ်သေဆုံး။
Mirabai Merta သူမ၏နေအိမ်မြို့သို့ပြန်လာခဲ့ပေမယ့်သူ့မိသားစုကိုလည်း Krishnu သစ် Bhaki ကိုးကွယ်အံ့သောငှါအစဉ်အလာဘာသာရေးအလေ့အကျင့်ကနေသူမကိုပြောင်းလဲဆန့်ကျင်။ သူမသည်နောက်ပိုင်းတွင် Vrindaban, Krishnu မှသန့်ရှင်းသောအရာဌာန၌တစ်ဦးဘာသာရေးအသိုင်းအဝိုင်းဝင်ရောက်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ Bhakti လှုပ်ရှားမှုမှ Mirabai ရဲ့အလှူငွေသူမ၏ဂီတအတွက်အဓိကအားခဲ့: သူမသီချင်းတွေကိုရာပေါင်းများစွာရေးသားခဲ့သည်များနှင့်တစ်ဦး raga သီချင်းတွေသီဆိုတစ် mode ကိုစတင်ခဲ့သည်။ အကြောင်း 200-400 သီချင်းတွေကို Mirabai ကရေးသားထားကြောင်းအဖြစ်ပညာရှင်များကလက်ခံကြသည်; အခြား 800-1000 သူမ၏မှစွပ်စွဲခဲ့ကြသည်။
ကြိုးတစ်ခုစကားရပ်အဖြစ် - - Mirabai သီချင်းတွေ၏စာရေးဆရာအဖြစ်သူ့ကိုယ်သူဂုဏျတငျဘူးဒါကြောင့်သူမ၏ရေးသားခဲ့သောမသေချာမရေရာဖြစ်ပါတယ်။ သီချင်းတွေရှည်လျားရေးသားခဲ့သောတာဝန်ပေးဖို့၏တာဝန်ရှုပ်ထွေးထားတဲ့သူတို့ရဲ့ဖွဲ့စည်းမှု, ပြီးနောက်သည်အထိချကျမ်းစာ၌ရေးထားသည်မဟုတ်, နှုတ်ထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။
Mirabai ရဲ့သီချင်းတွေကို Krishna ဟိန္ဒူရဲ့ဇနီးအဖြစ်နီးပါးအမြဲ, Krishna ဟိန္ဒူမှသူမ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ဆည်းကပ်ဖော်ပြ။ သီချင်းတွေဝမ်းမြောက်နှင့်ချစ်ခြင်း၏နာကျင်မှုနှစ်ဦးစလုံး၏ဟောပြောလော့။ ဥပစာစကား, Mirabai Krishna ဟိန္ဒူတစ်ဦးကဗျာဆရာရဲ့ကိုယ်စားပြုမှုသောတစ်လောကလုံးကိုယ့်ကိုယ်ကို, ဒါမှမဟုတ် paramatma အတူတစျခုဖွစျဖို့, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမိမိကိုယ်ကို, အတ္တ၏တောင့်မှထောက်ပြသည်။ Mirabai Rajasthani နှင့် Braj Bhasa ဘာသာစကားများသူမ၏သီချင်းများရေးသားခဲ့သည်, သူတို့သည်ဟိန်ဒီနှင့် Gujarati သို့ဘာသာပြန်ထားသောခဲ့ကြသည်။
လမ်း လွဲ. အချို့နှစ်ကြာပြီးနောက် Mirabai Dwarka, Krishna ဟိန္ဒူမှသန့်ရှင်းသောအခြားသောအရပ်မှာသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
Mirabai ရဲ့မိသားစုလေးစားမှုနှင့်ရိုးရာကျားမယဇျပူဇျောဆန္ဒရှိကြောင်း, မိသားစုနှင့်ဇာတ်ကန့်သတ်ခြင်း, Krishna ဟိန္ဒူဖို့လုံးဝနှင့်ထက်ထက်သန်သန်သူ့ကိုယ်သူမွှုပျနှံဖို့, လူတန်းစား, သူမ၏ ecstatic ဆည်းကပ်ခြင်းနှင့်လိင်အပေါ်အခြေခံကြောင်းပယ်ချရိုးရာကွဲပြားခြင်းအလေးပေးတဲ့ဘာသာရေးလှုပ်ရှားမှုတွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမော်ဒယ်လုပ် , ဇာတ်နှင့်အယူဝါဒ။
Mirabai သူမကသူ့ကိုသူမကသူမ၏မွကွေီးအိမ်ထောင်ဖက်သည် Rajput မင်းသားမှမပေးမယ်လို့သစ္စာရှိမှုပေးခြင်း, သူမ၏ရှေးခယျြသောအိမ်ထောင်ဖက်, Krishna ဟိန္ဒူမှမိမိကိုယ်ကိုကျိန်သာသဘောအရသူမ၏လူတွေရဲ့အစဉ်အလာအရသိရသည်မှာ "သစ္စာစောင့်သိဇနီး" ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဘာသာတရား: ဟိန္ဒူ: Bhakti လှုပ်ရှားမှု
"ငါသည်မေတ္တာဆည်းကပ်၏မျက်နှာကို ထောက်. လာ. , ကမ္ဘာကြီးကိုကိုမြင်လျှင်, ငါငိုလေ၏။ "
"အို Krishna ကသငျသညျအစဉျအမွဲစှာကြှနျတေျာ့ကလေးဘဝချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုတန်ဖိုးထားခဲ့သလဲ"
"မဟာကချေသည်အပေါငျးတို့သညျအခွားသောအရောင်အဆင်းကိုချွတ်ကျွန်မခင်ပွန်း, မိုးရွာရွာအလျင်ကဖြစ်၏။ "
"ကျွန်မရဲ့ Giridhara မတိုင်မီအားထုတ်။ / တဖန်တဖန်ငါ, ထိုပိုင်းခြားသိမြင်ဝေဖန်စိတ်တော် / ထိုစမ်းသပ်မှုမှသူ့ဟောင်းတဦးချစ်ခြင်းမေတ္တာထားရန် / ခုန်တတ်ကြ၏။ "
"ငါဆင်ရဲ့ပခုံးများ၏လှုပ်ရှားခံစားခဲ့ရပြီ / ယခုသငျသညျငါ့ကို Jackass အပေါ် / တက်ချင်အလေးအနက်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားပါ။ "
မဂ္ဂီလီနာက Walker: ပထမဦးဆုံးအမျိုးသမီးဘဏ်နိုင်ငံတော်သမ္မတ
Mary Ann Shadd cari
Marian Anderson တို့, Contralto
Perez - အမည်အဓိပ္ပာယ် & မူလအစ
Quotes က 'တောရိုင်း၏ခေါ်ရန်' '
အခြေခံလူတန်းစားများ Lobby ကဘာလဲ?
Anaximenes နှင့် Milesian ကျောင်း
'' Baa, Baa, အမဲရောင်သိုး '' ဂစ်တာ on ရဲ့ Chord Play လုပ်နည်း
အားလုံး convergence ပြားနယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ရေးအကြောင်း
အဆိုပါ Stableford သို့မဟုတ်ပြင်ဆင်ထားသော Stableford ဂေါက်သီး Format ကို Play လုပ်နည်း
အဘယ်ကြောင့်ဆံပင် Grey က Turn ပါသလား?
ပရောဖကျက NUH (နောဧသည်), သင်္ဘောများနှင့်အစ္စလာမ့်သွန်သင်ချက်များတွင်ရေလွှမ်းမိုး
CSU Stanislaus GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
အဆိုပါ Bisque ဂေါက်သီးဂိမ်း Play လုပ်နည်း
နှင်းလျောစီး Allow မနေပါနဲ့ဒါကနှင်းလျှောစီး Resorts
မြောက်အမေရိက 10 အကြီးမားဆုံးပိုးတောင်မာမိသားစုများ